15 qof oo Soomaali ah oo ku dhimatay Gobolka Luapula ee dalka Zambia (Daawo Sawirada).. - iftineducation.com
iftineducation.com – Ugu yaraan 15 qof oo Soomaali ah, ayaa ku dhimatay Gobolka Luapula ee dalka Zambia, ka dib markii uu naqaska kula dhagay gaari konteenar ah oo ay ku safrayeen.
Gaarigan oo ay saarneyd 50 qof oo Soomaali ah, ayaa waxaa la sheegay inay ka soo amba baxeen dalka Tanzania, iyagoona qorsheynaayay in si qarsoodi ah ay ku galaan Zambia, si ay uga sii tallaaban South Africa.
Booliska Gobolka Luapula, ayaa waxay sheegeen inay maqleen qaylo ka soo yeereysay gaariga, markii dambena ay wadihii gaariga ku amrayn in uu furo qaybta dambe ee gaarigaasi, sidaana ay ku arkayn meydadka Somalida.
Booliska waxaa laga soo xigtay in gaariga qaybtiisa hore la soo saaray jawaano ay ku jiraan digir, halka qaybta kalana lagu soo qariyay Soomaalida.
Soomaalida ka badbaaday dhacdadan, ayaa waxay sheegeen in gaari kale ay ku safrayeen, balse lagu soo wareejiyay gaarigan, xilli ay marayeen Magaalada Kasama ee dalkaasi Zambia.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliya, ayaan weli ka hadlin Soomaalida ku dhimatay Zambia.